News Collection: श्रीमतीको शवसँग ६ घण्टा सेक्स !!!
श्रीमतीको शवसँग ६ घण्टा सेक्स !!!
नेपालका कानुन दैवले जानुन् भन्ने उखान छ । तर यो दुनियामा हाम्रो देशमा भन्दा अरु देशमै नियम कानुन अनौठा तथा जब्बर हुँदा रहेछन् जसलाई दैवले पनि बुझ्न गाह्रो छ । यस्तै अनौठो तथा विवादास्पद कानुन इजिप्टमा बन्दैछ ।
एजेन्सीहरुका अनुसार इजिप्टमा ‘अन्तिम संस्कार सम्भोग कानुन’ बन्ने भएको छ । यो कानुन कार्यान्वयन भएपछि हरेक श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीको मृत्यु भएपछि पनि मृतक श्रीमतीको शवसँग मरेको ६ घण्टासम्म सेक्स गर्न पाउनेछ । मुस्लिम बाहुल्य संसदले बनाएको उक्त विवादास्पद कानुनको मस्यौदाले विवाह गर्ने न्युनतम उमेर समेत घटाएर १४ वर्षमा झारेको छ । इजिप्टको महिला परिषद्ले भने यस्तो कानुनको कडा विरोध गरेको छ ।
इजिप्टमा शवसँग सम्भोग गर्ने विषय सन् २०११ को मे मा सबैभन्दा पहिले उठेको थियो । त्यसबेला एकजना धर्मगुरुले मानिसको वैवाहिक सम्बन्ध मृत्युपछि पनि वैध रहने र महिलालाई आफ्नो मृतक श्रीमानसँग पनि सेक्स गर्न पाउने अधिकार रहेको बताएका थिए ।
इजिप्टको संसदले पुरुषलाई श्रीमतीको शवसँग सम्भोग गर्ने अधिकार सहितको कानुन बनाउन लागेको खबरले इजिप्टभरी नै निकै चर्चा पाएको छ । तर यसको बारेमा संसदले औपचारिक जानकारी भने गराएको छैन । कतिपयले पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारकका समर्थकले यस्तो हौवा चलाएको बताएका छन् ।